Home TOROHEVITRA FOTOTRA EUROPEAN Mpilalao baolina kitra frantsay Moussa Sissoko Tantara Mitantara Momba Ny Tantaram-pitiavana Ataon'ny Tombokely Tsiambaratelo
Ny LB dia manolotra ny tantara feno momba ny "football genius" fantatra amin'ny anarana hoe "DIY". Ny tantaran'ny tantaram-pitiavan'i Moussa Sissoko momba ny tantaram-pianakaviana sy ny tantaram-piainan'ny tsy fantatra anarana dia mitondra ny fitantarana feno momba ny zava-mitranga tsy manam-paharoa amin'ny fotoana maha-fahazazany hatramin'ny fahazazany. Ny famakafakana dia ahitana ny tantaram-piainany talohan'ny lazany, ny fiainam-pianakaviany, ny fiainam-pifandraisana, ary ny zavatra hafa momba ny OFF-Pitch (kely fantany) momba azy.
Eny, fantatry ny rehetra fa mpilalao miditra midina boribory marobe izy, saingy vitsivitsy ihany no mandinika ny Bio Bio Moussa Sissoko izay mahaliana. Ankehitriny tsy misy ado, alefaso.
Moussa Sissoko Childhood Story Plus Untold Biography Facts-Fiainana tany am-piandohana sy tamina fianakaviana
Moussa Sissoko dia teraka tamin'ny 16th of August, 1989 tany Le Blanc-Mesnil, Frantsa. Izy dia teraka ho an'ny ray aman-dreny maliana maliana izay tsy dia fantatra loatra. Renim-pianakaviana Sissoko dia mpikarakara tokantrano raha niasa tamin'ny asa fanorenana tamin'ny fotoana nahaterahany ny rainy.
Sissoko dia teraka tamin'ny lahimatoa amin'ny ankizy efatra, ary misy anabavy telo vavy. Ny fitomboan'ny Le Blanc-Mesnil, tanora Sissoko dia nandray anjara mavitrika tamin'ny filalaovan'ny baolina tamin'ny hafanam-po ary nieritreritra fa ny fanatanjahatena dia hanana tahiry tsara ho azy amin'ny ho avy. Ao amin'ny teniny;
"Tsapako haingana fa ny baolina kitra dia afaka mitarika ahy hanana fiainana tsaratsara kokoa".
Nanamafy ny finoany ny fatokisany izay nozarain'ny ray aman-dreniny ihany koa i Young Sissoko izay napetraka hanangana asa amin'ny baolina kitra rehefa nosoratany tao amin'ny klioban'ny tanora Esperance Aulnay fony izy enina enina fotsiny. Esperance Aulnay dia fikambanan'ny tanora eo akaiky eo Aulnay-sous-Bois, faritra avaratr'i Paris.
Moussa Sissoko Childhood Story Plus Untold Biography Facts-Asa fanorenana
Sissoko dia nanatontosa ny telo taona manaraka tamin'ny fiainany tany Esperance Aulnay izay nilalao baolina niaraka tamin'ny fitiavam-bahaingoany noho ny fitiavan-tena ho an'ny andro tsara kokoa. Tamin'izany fotoana izany dia nampiofana intelo isan-kerinandro tao amin'ny klioba izy teo ambany fanaraha-mason'ny mpanazatra Adama Dieye, izay misolo tena ny klioba amin'izao fotoana izao futsal ekipa. Sissoko dia manoritsoritra an'i Dieye ho mpanolotsaina manan-danja amin'ny fampandrosoana;
"Androany aho izao noho izy"
Nihatsara ny asany tamin'ny asan'ny tanorany rehefa niditra tao amin'ny Red Star Paris izy nandritra ny fotoana lava be. Tao amin'ny Red Star dia nanao fampisehoana mahatalanjona i Sissoko, izay niaro azy ho any Toulouse izay nahitany voalohany ny fiainana tsara izay nokarakarain'ny baolina kitra ho azy.
Nirotsaka an-tsitrapo tamin'ny fanapaha-kevitry ny filalaovana tsaratsara kokoa tamin'ny lalao rehetra i Sissoko, fa tsy nanintona fotsiny ireo mpitantana azy tamin'ny ambaratonga samihafa fa nipoitra teo amin'ny laharan'ny klioba.
Moussa Sissoko Childhood Story Plus Untold Biography Facts-Mitsangàna mba haka izany
Tao Toulouse no nanaovan'i Sissoko ny laharam-boninahitra liginy tamin'ny 2007. Nanao zavatra be dia be izy ary nantsoina ny vanim-potoana manaraka. Ny famerenana azy indray dia nahazo mari-pankasitrahana maromaro tao anatinà fahafaha-manao hafa, anisan'izany ny fahaiza-manao nilalao tao amin'ny UEFA Europa League.
Tsy ela talohan'ny tombontsoa avy amin'ny Tottenham Hotspur tamin'ny taona 2009, ary koa ny tombontsoa manaraka avy any Manchester City, Inter Milan, Juventus sy ireo andian-tserasera alemà Bayern Munich, dia nahatonga azy ho nalaza tany ivelan'ny baolina kitra Frantsay. Na dia tsy nifantoka aza ny hetsika noho ny tsy fahavitrihan'ny klioba hamela azy handeha, dia navela ho any Newcastle ihany i Sissoko tamin'ny taona 2013.
Tamin'ny 31 August 2016, nosoniavin'i Sissoko Tottenham Hotspur amin'ny fifanarahana dimy taona, ho an'ny £ 30 tapitrisa. Ny ambiny, araka ny filazany, dia tantara.
Moussa Sissoko dia iray amin'ireo mpilalao baolina kitra maro tia ny fiainany tsy miankina, lavitra ny oron'ny mpampiasa media sosialy sy ny gazety. Na dia izany aza, tsy misy ny mandà fa manana ny fo amam-pitiavana izay tsy dia fantatra loatra izy.
Sissoko dia nanao sarin-doha na sipa iray avy amin'ny vehivavy Frantsay malaza antsoina hoe Marylou Sidibe (tsy mifandray amin'ny Djibril Sidibe). Ny duo izay tsy manambady dia manandrana manao izay fara heriny hialana amin'ny radara ampahibemaso. Matetika izy ireo no tsy nahita afa-tsy nandritra ny fitsangatsanganana ary namoaka sary fotsiny izay nahatonga azy ireo nankafy ny fiainany manokana nandritra ny fiara fitateram-bahoaka.
Na dia izany aza, i Moussa Sissoko dia manana zanapeo 6 taona (tamin'ny vanin'ity lahatsoratra ity) nantsoina hoe Kai.
Tsy dia fantatra loatra ny momba ny renin'i Kai izay nibanjina ny zanany lahy talohan'ny lalao iray teo anelanelan'ny Newcastle sy Manchester tamin'ny Aprily 2016.
Sissoko no manambara ny fifandraisany amin'ny zanany:
"Efa antitra ny zanako lahy hahatakatra ny asako, raha mahita ahy eny amin'ny kianja iray, amin'ny fahitalavitra na amin'ny dokambarotra, dia lasa adala (mitsikitsiky). Mirehareha be dia be izy no nirehareha taminy mihitsy tamin'ny mpiara-mianatra taminy rehefa nandeha nianatra izy nilaza fa ny rainy dia milalao ho an'ny ekipa France sy Newcastle ".
Araka ny efa hitantsika teo aloha, ny zanakalahin'i Moussa Sissoko sy Rafa Benitez dia toa manana fifandraisana tena akaiky eo amin'ny sary etsy ambany.
Maro no mety hiantso hoe "tetikady iray"Nilalao Rafa dia tsy nanakana an'i Sissoko tsy hiala ny klioba ho an'i Tottenham ao amin'ny 2013.
Sissoko dia nanaporofo fa tsy voatery hifaninana amin'ny baolina kitra ny fiainan'ny mpilalao baolina kitra iray. Izany dia asehon'ny fitiavany ireo olona mampihomehy, indrindra fa ny "Superman"Ary"Spiderman"Avy amin'ny sarimihetsika DC sy Marvel.
Tsy mifarana izany, sady tia mozika frantsay ihany koa izy; Zaz, ary manan-danja amin'ny andraikitra mampihomehy ataon'ny mpilalao sarimihetsika Amerikana Jim Carey amin'ny sarimihetsika toy ny "Bruce Almighty" ary koa "Dumb and Dumber". Iza no mety hahatsiaro an'i Moussa fa i Sissoko, na dia manaitra ny fahamendrehana eo amin'ny habakabaka aza, dia afaka manana ny fon'ny zaza sy ny tsirony ho an'ny mozika tsara ?.
Moussa Sissoko Childhood Story Plus Untold Biography Facts-Fiainana manokana
Raha ny momba ny toetran'i Moussa Sissoko manoloana ny toerany dia niteny indray mandeha izy;
"Natao tsiambaratelo foana aho, natokan-toerana sy fanajana. Izany dia tsy manakana ahy tsy hiresaka raha ilaina.
Na eo aza ny maha-mpilalao iraisam-pirenena azy, i Moussa dia tsy mahatsapa ho ambony noho ny hafa. Toy ny a home bird izay tsy sahy mivoaka afa-tsy filalaovana filma, milalao miaraka amin'ny zanany ary mahita namana na fianakaviana.
Tamin'izany fotoana izany tany amin'ny manodidina (Aulnay-sous-Bois), Moussa dia nanana ny anarany manokana. Ny tsara indrindra dia tiany ny mieritreritra zavatra amin'ny fotoana mbola tanora. Nahazo ny anaram-bosotra "DIY" izy.
"Tena mampihomehy fa mbola miantso ahy foana ny olona. Maka izany tsara aho. Mampatsiahy ahy ny nofinofinay kely. Tsara foana ny mahita namana ary tsy manadino hoe avy aiza ianao. Androany, tsy dia manao 'DIY' be loatra aho. Tsy manam-potoana aho ary aleoko mividy kitapo efa niangona, mora kokoa. "
Sissoko tia milalao lalao video sy milomano. Izy dia tia fiarakodia fiarakodia Audis, Range Rovers, BMWs sy Mercs izay mamorona ny Garage.
I Sissoko dia heverina ho mpitarika naterak'ilay avy eo Newcastle Coach, Neil Cameron. Izany no nitarika ny mpanazatra hanome an'i Sissoko ny loko kapitenin'ny kapitenin-tsambo teo aloha Fabricio Coloccini dia nisy fiantraikany vokatry ny ratra nahazo azy.
Sissoko, izay tamin'ny vanim-potoana faharoa tao Newcastle dia gaga tamin'ny andraikitra mahagaga saingy tsy namela ny fitokisan'ny mpanazatra azy izy raha nitondra ny ekipany hahazoana ny hevi-dehibe amin'ny lalao amin'ny ekipa goavana amin'ny baolina anglisy. Na dia izany aza, ireo teboka ireo dia tsy ampy loatra mba hisakanana an'i Newcastle tsy hianjera ao anatin'io vanim-potoana io.
Moussa Sissoko Childhood Story Plus Untold Biography Facts-Mahavariana
Tsy i Sissoko no mpilalao slate madio Ryan Giggs ary Andres Iniesta ireo. Sissoko dia nanangona ny fampitandremany ara-drariny ary nitazona imbetsaka be. Nahazo ny karatra mavo voalohany tao amin'ny laharam-bonon'ny UEFA Champions League izy tamin'ny Liverpool tamin'ny Aogositra 15 taorian'ny nahatongavany tao anatin'ny minitra farany tamin'ny 7.
Tamin'ny volana desambra 2013, Sissoko no nahazo ny laharana voalohany amin'ny fifehezana amin'ny Fikambanana Anglisy Football mpitsikilo Mike Jones amin'ny tarehy.
Na izany aza,nahy', tahaka ny nitranga fony izy niezaka ny hisintaka avy any amin'ny mpitifitra Southampton.
Manontany tena ve ny mpilalao baolina iray any an-dakozia?
Eny, i Moussa Sissoko dia iray amin'ireo kintan'i Tottenham izay nasongadina tao amin'ny Healthy Living With AIA & Hotspur TV.
Ao amin'ny fampisehoana, Moussa Sissoko sy Hugo Lloris dia notarihan'i Jeremy Pang, ilay chef malaza Jeremy Pang sy Spurs mpitsabo biby, i Hannah Sheridan raha toa ireo mpilalao roa ireo manandrana ny tsara indrindra azony hanamboarana Prawn Fried Rice sy Thai Green Curry.
Ny fomba mahatsikaiky, Tsy misy olona mahafantatra, fa tena azo antoka izany. Ankoatra ny fahaiza-manaony ara-kina, i Moussa Sissoko dia mpifankatia amin'ny sakafo frantsay sy italianina. Ho an'ny sakafo matsiro dia tia ny pizza pipero izy.
MIEZAHA HAHAY: Misaotra ny famakiana ny tantaram-pitiavan'i Moussa Sissoko momba ny tantaram-pianakaviana sy ny zava-misy marina momba ny zavakanto. amin'ny LifeBogger, dia miezaka izahay mba hahatontosa ny marina sy ny rariny. Raha mahita zavatra izay tsy mijery tsara ato amin'ity lahatsoratra ity ianao, azafady azafady ny fanamarihanao na manontania anay !.